ग्रिजम्यानको सुरक्षाका लागि बार्सिलोनाको होमग्रउण्डमा यति कडा व्यवस्था !, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
ग्रिजम्यानको सुरक्षाका लागि बार्सिलोनाको होमग्रउण्डमा यति कडा व्यवस्था !
काठमाडौं। बार्सिलोना र एथ्लेटिको मड्रिडबीच फ्रासका स्टार स्टा«ाइकर एन्टोइन ग्रीजम्यानलाई बार्सिलोना ल्याउने सम्बन्धी सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । ग्रिजम्यानले एथ्लेटिको छोड्ने घोषणा अघिल्लो सिजन नसकिँदै गरेका थिए र बार्सिलोना उनलाई ल्याउन चाहन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमका अनुसार ग्रीजम्यान बार्सा अनुबन्ध हुने पक्का भइसकेको छ । अब बार्साले ग्रीजम्यानका लागि एथ्लेटिकोलाई १२० मिलियन युरो रिलिज क्लज तिरेपछि ग्रीजम्यान आइतबार बार्सिलोना आइसक्ने स्पेनिस मिडिया मार्काले जनाएको छ । यद्यपी बार्सिलोनाका समर्थक ग्रीजम्यानसँग रिसाएका छन् । गत सिजन नै बार्साले ग्रीजम्यानलाई बार्सा आउन अफर गरेकोे थियो । त्यसबेला ग्रीजम्यानले आफू बार्सा नआउने बताएका थिए ।
बार्सामा अनुबन्ध भएपछि ग्रीजम्यानलाई घरेलु मैदान क्याम्प नाउँ प्रदर्शनीको लागि लगिनेछ । त्यहाँ उनले आफूले पाएको जर्सी लगाउनेछन् । यद्यपी त्यसबेला समर्थकलाई भने उपस्थित नगराइने भएको छ । मर्काका अनुसार ग्रीजम्यानसँग रिसाएका समर्थकले उनलाई आक्रमण गर्न सक्छन् । सिजन सुरुवात हुन अझै ३ हप्ता बाँकी छ । त्यसबेलासम्म ग्रीजम्यानले बार्साका समर्थकको मन जितिसक्ने अनुमान गरिएको छ ।